हामी जनकपुरबासीको यो कस्तो निर्लज्जता ?(बिचार)
प्रत्येक वर्ष भव्यतासाथ मनाईने विश्व प्रसिद्ध रामजानकी विवाहपञ्चमी महोत्सव सुरु भईसकेको छ । आज तिलकोत्सव उत्सव । कसलाई इक्षा हँुदैन् भगवान र भगवतीको वैवाहिक सबै कार्यक्रम उनकै जन्मस्थलमा पुगेर सहभागी हुने । हो त्यस्तै ईक्षा आकांक्षा बोकेर स्वदेश तथा छिमेक देशभारत लगायत विन्नि देशहरुबाट श्रद्धालु भक्तजन एवं तीर्थ यात्रीहरु माता जानकीको जन्मस्थल जनकपुर आउने क्रम जारी छ ।
तर प्रहरी प्रशासन त सुतेका नै छन् । जनकपुरका विकास र समाजसेवाको उद्देश्यसहित खुलेका युवाक्लवहरुसमेत कुम्भकर्णका निद्रामा मस्त छन् भन्ने भान हुन्छ । कारण जानकी मन्दिर देखि विवाह मण्डप जाने सडकको पेटीमा श्रद्धालु भक्तजन खुल्ला आकाश मुनि मंसिरको जाडो छल्न बाध्य छन् । भूई मै पातलो प्लाष्टिक ओछ्याएर सुत्न बाध्य छन् । ता पनि नत हामी जनकपुरवासीलाई लाज लागेको छ । नत विभिन्न पूजाप्रतिष्ठाको बेला लाखौं रकम चन्दा अशुलेर दुई दिनको तामझाम र घोटाला गर्ने युवाक्लवहरुलाई । अरगज्जा सरको वर्षाती पनि भाडामा लागेको छ । जसमा दफालीहरु तथा कपडा बेच्नेहरुले खुट्टा टेक्न सम्मलाई ठाउँ छाडेका छैनन् । साथै विवाह पंचमी महोत्सवको सबै तैयारी पुरा भईसकेको दावी गर्ने यहाँका सम्पूर्ण निकायले कतिको तयारी गरेका छ भन्ने कुरा हामी खुल्ला आकाशमा रात विताउने श्रद्धालुभक्तहरुको अवस्थालाई हेरेर नजर अन्दाज गर्न सक्छौ ।
मेरो प्रश्न छ यहाँका प्रशासन ,युवाक्लव,नागरिक समाजलाई विवाह पंचमी महोत्सवको सबै तैयारी को मतलब के ? ईतिहास साक्षी छ प्रत्येक वर्ष भव्यता साथ मनाई रामजानकी विवाहमहोत्सवमा सहभागी हुन लाखौं श्रद्धालुभक्तजन तथा विदेशी पर्यटकहरु जनकपुर आउने गर्दछन् । जानकारी हँुदाहँुदै पनि सम्बन्धीत निकाय र स्थानिय युवाक्लवहरुले ठाउँ ठाउँमा त्रिपाल,टेन्ट,अस्थायी शौचालयको व्यवस्था नगर्नुको अर्थ स्पष्ट गर्दछ । कत्तिको जिम्मेवार र जिम्मेवार्री निर्वाह गर्दैछन् यीनिहरु । स्मरण होला गत वर्ष मधेश आन्दोलन र आन्दोलनको क्रममा मधेशी जनतालाई चुनौती दिँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विवाहपंचमीकै दिन जानकी मन्दिर दर्शन गर्न आउँदा प्रहरी र आन्दोलनकारी विच झडप भएको थियो । भने जानकी मन्दिरको प्राँगणमा रहेका छिमेकी देश भारतका दर्शनार्थीलाई प्रहरीले घिसारेर निकाल्नु तथा कुटपिट गर्नाले उनीहरु घाईते भएर विवाह उत्सवमा सहभागी नभई यत्तिकै फर्केका थिए । र यस वर्ष सम्बन्धित निकायको लापरवाहीले आगामी दिनमा विवाहपंचमी जस्ता मिथिलाञ्चलको ठुलो पर्वको अस्तित्व संकटमा पर्न नसकला भन्न सकिन्न । यस्ता ऐतिहासिक उत्सवहरुलाई व्यवस्थित नगरेको खण्डमा पर्यटक तथा श्रद्धालु जनकपुर आउन छाड्ने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले यस्ता उत्सवहरुको शाखलाई बचाउन समयमै हामी सबैले ध्यान नदिए पर्यटन प्रवद्र्धनको ठुलो सम्भावना बोकेको जनकपुर भोलीका दिनमा पर्यटकको वितृष्णा बन्ने सहर नबनोस् । यसले जनकपुरबासीको अहित नै हुने छ । त्यसैले समयमै सबै पक्षको चेत खुलोस् । जय माँ जानकी ।
जनकपुरमा जानकी दर्शन गर्न आउने श्रद्धालुभक्तजन एवं विदेशी पर्यटकहरु हाम्रा लागि पाहुना हुन् । हाम्रो मिथिला संस्कृतिमा पाहुना भनेको देवता समान हो । संस्कृतमा एउटा भनाई पनि छ “अतिथि देवो भव” । यदि यस कुरालाई हामीले विर्सेर पाहुनालाई विवाहपञ्चमी जस्तो ठुलो महोत्सवमासमेत एक दिनको लागि आवाश , शौचलय , खानेपानी जस्ता कुराको व्यवस्थापन गर्न सकेनौ भने धिकार छ हामी जनकपुपरबासी माथि । यस्तो नहोस् आज आउन लागेका पाहुनालाईसमेत हामीले व्यवस्थापन गर्न नसकेर भोलीका दिनमा पाहुना कुरेर बस्नु परोस् ।